Fombafomba trano vao?
Date: 27 octobre 2016 - 02:41
Eo andalam-panorenana trano izahay izao. Nilaza ny ray amandreninay fa tsy maintsy mamono akoho eo antokotany sy mandraraka toaka eo anjoron-trano 4 fa izany hono no fomban-drazana.
Tsy nieritreritra an'izany mihitsy anefa izahay mivady ary tsy dia mazoto loatra amin-javatra toy izany. Tsy resaka finoana na tsia akory fa tsy heverinay ho zava-dehibe fotsiny izany.
Inona kay no anton'ny hanaovana an'izany?
Inona no hitranga raha tsy manao an'izany?
Misaotra anareo mamaly.
Re: Fombafomba trano vao?
Date: 27 octobre 2016 - 08:05
anontanio ny ray amandreninareo !!
Date: 27 octobre 2016 - 10:46
raha gasy ianao dia misy fombafomba gasy tsy maintsy arahina , ny ray amandreny aloha anotaniana
Date: 27 octobre 2016 - 10:54
Raha ohatra ka tsy misy maha-ratsy azy dia inona moa no tsy anaovana ilay fomba e? Sa raha vao maheno hoe fomba nareo de mivadika hôrera? Jereo tsara ny dikan'ny hoe : "TSY MAHALALA FOMBA"
Date: 27 octobre 2016 - 10:55
Miarahaba sy misaotra izay efa namaly,
Malagasy izahay ka. Fa ireo Ray aman-dreny ange nanontaniana, tonga dia hoe " aza be fanontaniana fa izay no fomba dia izay" ka izany no antony angatahana fanazavana eto.
Date: 27 octobre 2016 - 11:07
$ongomby >>> izany hoe tsy mahalala fomba izany ny fahazoako azy dia hoe misy fitsipika ara-piaraha-monina tokony arahana ka tsy arahana. Ohatra : miarahaba, misaotra, mamangy raha misy manjo...
Ilay zavatra hoe tsy maintsy atao ka tsy fantatra akory ny antony sy ny dikany, no manahirana ahy. Tsy hoe misy maharatsy na tsia fa tsy zazakely intsony akory izahay ka hoe: tsy maintsy fa izay no fomba! "
Mba misy afaka manazava fotsiny ve ny antony hanaovana an'izany? Misaotra
Par: efa nadalo teo
Date: 27 octobre 2016 - 12:10
Tsy tena mamaly ilay fanontaniana napetraky ny tompon’ny Sujet ity fa kosa fijoroana vavolombelona ihany.
Raha ny marina dia nanana ny finoany ny Malagasy hatrizay ka misy ny fomba fanaony angatahana fitahiana sy tso-drano ny mba ahasoa sy ahatsara ary ny hanambinana amin’ireo zava-nanasatra rehetra. Tsy hita hazavaina intsony izany ny antony hanaovana an’izatsy na iroa .
Ho an’ny taranaka ankehitriny izay efa nolalovan’ny Finoana Kristiana sy ny fanatontoloana ary efa tsy dia nampiasa intsony ireo Fomba fahiny dia tsy dia manaiky intsony ireny Fomba ireny.
Amiko dia tsy ifanomezantsiny izany fa SAFIDY io ary ny FINOANA dia tsy tokony IFANERENA fa FIFANDRESEN-DAHATRA .
Ny tena olana mipetraka sisa dia ny handresen-dahatra ireo Ray aman-dreny izay mbola mifikitra amin’ny fomba fahiny izay tsy tiana ho tohizana intsony noho ny antony maro nefa koa tsy handratra ny hambom-pondreo . Mila tact izany raha tsy izany dia mety ho rava hatramin’ny fihavanana.
Efa nandalovana izany situation izany (nanagana trano, fasana ) fa izahay nisafidy ny tsy hanaraka izay fombandreo taloha noho ny antony maro nefa tsy nisy naninona na naninona :
- Tsy nanandro
- tsy namono akoho na nadatsa-dra biby atao sorona
- ny toaka nosotroinay fa tsy nararaka teny anjorontrano, tsy nomena akory ny Razana satria izy ireo Croix Bleue daholo,
- Mbola mahatsiaro tena ho Malagasy ihany izahay avy eo
Amaranako azy dia safidy io, TSY MISY OLONA VOATERY HIAINA NY ZAVATRA TSY TIANY IZANY RAHA FOMBAFOMBA NO RESAHANA.
Ataovy ampifaliana izay safidinareo. Mahavita soa izay atao e.
Date: 27 octobre 2016 - 13:10
Efa nadalo teo>>> misaotra betsaka fa mazava be ny valinteninao. Mirary soa.
Date: 27 octobre 2016 - 13:13
Aza miasa saina ny amin'ny zany, mety fomban'ireto RAD zany fa saingy tsy voatery arahina.
Sady ampiana hoe dia @ zay maninona?
Ny ahy dia nanao fanompoam-pivavahana tao an-trano.
Tsetsatsetsa tsy aritra : Rehefa misy misotro toaka ny fianakaviana dia misy lay mandraraka kely amin'ny tany dia hoe ho an'ny razana dia teneniko, aza ariana zany.
Dia nisy iray niteny hoe ratsy hono iny satria lohany
Date: 27 octobre 2016 - 13:28
Izao ry ise no izy a ,amintsika malagasy dia betsaka ny fomba tsy maintsy arahina indrindra rehefa manao trano izany .Rehefa tsy milaza ny fomba ny RAD dia aoka izao aza mi insiste akory .Izao no hevitra avy amiko ,marihiko fa ny taona dia efa eo eo ihany aho ,tsy zandriny intsony ary tsy zokiny be koa ,ary efa niaina zava maro tao ny mamy ary tao ny mangidy .Ny tsara indrindra eny fa na dia efa tara ary dia ny mijery mpanandro ,mino aho fa misy zavatra tsy maintsy ho amboariny ao ,ary avy eo dia izy ihany no milaza aminareo amin'ny fombafomba isan karazany .Hafatra feno fehendrena ny ahy koa dia anareo no mijery azy,ary tandremo fa ny tonon andro tsy maha lehilahy ary tsy misy izay tsy ho faty ,fa mbola hafa ny tratr'antitra .
Par: Efa nandalo teo
Date: 27 octobre 2016 - 14:00
Miverina kely fotsiny manampy fanazavana kely.
Ny gasy na havana na ray aman-dreny rehefa sendra tsy mitovy hevitra aminy ianao na tsy manao izay fanaony ianao dia tsy mahay afa-tsy ny miantso tody na manozona fa tsy miezaka ny ahatsapa sy hi-comprendre ny hafa izany.
Eo no ilana ny fahamatoran ny hevitra raisina.
Sainina tsara izay hatao na ihatsara-velatsihy hanome fifaliana azy ireo na dia tsy sitraky ny tena aza na hisafidy ny hiroso amin izay maharesy lahatra dia zakaina ny vokany.
SAFIDY IHANY IO.
Raha ny anay izao dia efa 16 taona no nahavitana ny trano..5 taona ny fasana tsy mbola nisy olana izany..mbola velona daholo na dia misy fianakaviana tsy miditra ny tokonanay intsony aza noho io fanapahan-kevitra io..tsy asiana olana mihitsy fa ny taona mandeha ihany.
Date: 27 octobre 2016 - 16:21
Misaotra antsika rehetra namaly fa misy hodinihana sy manampy daholo ireo rehetra ireo. Mankasitraka tompoko.
Par: Misy milaza
Date: 03 novembre 2016 - 16:44
Misy milaza hoe mila miray eo antokonam-baravarana hono aloha ary afafy eny amin'ny zorontrano avaratra atsinana ny tsimoka.
Par: efa nanao koa
Date: 04 novembre 2016 - 09:27
Ny fomba zany samy manana ny azy e! Tantara niainako fotsiny dia zaraiko. Izahay koa zao efa nanao trano ary notenenin'ny RaD mafy mihitsy t@ zany hoe tsy mahazo mampiditra vato mialoha mihitsy fa fasika sy biriky aloha ampidirina eo antanana zay vao vato fa manjary mafy be oatran'ny vato ny fanaovanareo io trano io. Narahana ny teniny satria olona efa manana traikefa, ny tena tanora tsy mahalala ninoninona. Rehefa hanao fototra ndray dia nanontany ny mpanao trano hoe rahoviana no afaka ianareo, izy no niteny oe andro talata sy alakamisy ihany izahay no manomboka asa fa safidio fotsiny ny daty, dia nojerena zay nampety azy, rehefa voatondro ny daty dia nanamarika ny RaD fa maizimbolana io andro io ka tsy tsara ny manangana zavatra @ andro maizimbolana fa miandrasa kely volana miakatra, teo no tsy nanaiky ny vadiko satria oe efa voaomana daholo ny rehetra fa tsy misy ahemotra zany intsony fa isika olona mivavaka, tsy nandresy lahatra aho fa zay no fanapahakeviny dia notanterahina ny ady fototra t@ andro efa noeritreretina ary fotoam-pivavahana no natao. Tsy hay na fifandrifian-javatra na inona aloha, fa 2 andro tao aorian'io dia narary mafy ny vadiko ary nindaosin'ny fahafatesana izy. Za moa nandray positif ny tranga oe sao lahy efa nanindry mandry azy ny andehanany ka nahatonga azy nisisika ny hanomboka ny asa t@ iny andro iny, asa aloha fa efa zay angamba ny anjarany.
Date: 04 novembre 2016 - 15:05
efa nanao koa> mampalahelo kely lay tantara. Fa vita ihany ve anefa lay trano?
Date: 04 novembre 2016 - 15:59
Ianareo ireo izany mino daholo hoe iny toaka kely atsipy iny no miaro anareo sy izay lazain'ny mpanandro anareo??
raha nitahy ny razana dia tena ny gasy mpamadika ireo ngamba no voatahy indrindra eto an-tany!!nefa.......
Date: 04 novembre 2016 - 16:20
Tohiny > Mbola tsy vita tanteraka ny trano fa efa mandroso tsara kosa anefa ny asa. Isaorako ny Tompo be dia be ny fitahiany narotsany tamiko.
Date: 04 novembre 2016 - 16:23
Inona ary no tsy anaovanareo izany na dia mpivavaka aza ianareo ? Akoho sy toaka aza ny fomba, izany ve dia tsy ataonareo? ka raha ataony hoe omby na kisoa 100kg dia ahoana hoy ianareo ? @#$%& ny akoho, vidio ny toaka 1l ataovy mendimendy tsara ny akoho dia atao tsaky toaka.
Par: hafatra kely
Date: 04 novembre 2016 - 21:14
Mba handray anjara kely fotsiny aho. Efa nahavita trano maro2 ny ray amandreniko taloa, tao ny nakàna mpanandro, tao ny tsy nakàna. Ny antony nakàna t@voalohany zany dé noho ny tsy finoana, ny tsy fahafantarana oe ny fivavahana @Andriamanitra dé mahasolo ny retra2, ny fady2 sns, dé natahotra ny oe loza sns dé naka mpanandro. Taty aoriana anefa dé tsy nila intsony satria efa nahalala tsara ny fototry ny fivavahana zany oe mpiandry no nalaina talohan'ny nananganana ny trano: nanokana fotoana zany nanaovana fivavahana dé aveo vao nanomboka niasa ny mpanao trano, taty aoriana moa mbola nanangana trano hafa ndray zareo dé tsy afaka ny mpiandry dé ny pasitera ndray no nantsoina nanao ny fotoampivavahana fohy talohan'ny nananganana ny vato voalohany. Ary farany, aty ivelany aho io dé mba afaka nanangana trano ihany koa zahay mianakavy kely efa ho 6 taona lasa zay, tsy niantso pasitera na mpanandro akory fa zahay mianakavy kely fotsiny no tonga nanokana fotoana fohy nivavahana mangina talohan'ny niasan'ny mpanao trano satria efa teo daolo zareo hanomboka ny asa. Donc amiko ra mino ianao dé apetraho amin'Andriamanitra daolo fotsiny ny as arehetra dé ho vitainy soa amantsara, tsy midika akory zany fa tsy hisy ny olana sns saingy handalo fotsiny zany. Mahereza dé mahavita be.
Date: 04 novembre 2016 - 21:18
fanampiny adinoko: ra ohatra fotsiny ny mpanao trano no milaza aminareo fa oe tsy miasa zahay ny andro zao na zao dé aleo arahina zany satria zareo no miasa sady efa manana ny fomba2-ny dé tsy tokony ho dikaina, tsy mahafaty antoka angamba zany satria tsy oe 1volana na andro maro2 no angatahiny fa manaraka fomba fotsiny. Ra zay manko ny finoany sy ny fady2 misy amin-dry zareo dé aleo hajaina.
Date: 05 novembre 2016 - 12:49
Miarahaba sy misaotra betsaka amin'ny valinteny sy torohevitra. Misy hodinihana sy manampy daholo ireo.Mirary soa.
Date: 06 novembre 2016 - 12:18
Io fombafomba sy fady nareo io tena tsy azoko mihitsy @ gasy!!miseho ho kristianina ny ankabeazany nefa ny fombafomban-drazana tsy azo avela
izay ilay hoe “ Manana ny endriky ny tœ-panahy araka an’Andriamanitra, nefa nandà ny heriny”
Date: 08 novembre 2016 - 10:19
Zà koa de nandà tsy hanao fombafomba manompo sampy sy razana izany mihitsy nanao ny tranoko na de betsaka aza ny namporisika. hatramin'ny hoe: ataovy mianavaratra fa tsy miankandrefana fa izay no mety am vintanareo mivady !!!
Kristiana aho dia Andriamanitra no hajaiko. Fa ny asa ny anay nandeha tsara hatramin'ny farany, tsy nisy olana, nisy havana lasa dispo aza nanaraka ny asa rehetra ka tsy nisy hoe halatra na fanondikodinana izany, nahita mpiasa mahay nanao ny finition rehetra, salama tsara izahay efa 5 taona izao nipetrahana tao aminy.
Fijoroana vavolombelona fotsiny ny ahy fa tsy mamporisika hankatsy na hankaroa
Date: 08 novembre 2016 - 11:48
Tsy azoko>> maneho hevitra mety hamaly ny fanontanianao aho .
Ny toe-tsaina sy kolon-tsaina Malagasy mihitsy io maka marimaritra iraisana io fa tsy mahasahy misafidy izay tiana na mety hoe handratra olona ilay safidy na tsia.
Izaho manokana dia nanao safidy hoe izay tiako / tianay ao antrano ihany no ataonay dia izay.
Misy ny faly ny olona misy ny tsy faly fa tsy maninona.
Ny antony mahatonga ny safidy angamba tsy dia detaille-ko fa ny azo lazaina dia tsy nisy naninona izahay mianakavy kely hatramin izao.
Misy rangahy izay niteny hoe: sahia manao dingana lavitra ..
Mety marina ihany io teniny io ..
Date: 09 novembre 2016 - 13:09
rabe zafy< misaotra anao fa tena maha-afapo ahy ny valinteninao! tena izay tokoa ny zava-misy!
afangaro foana ny fombafomba angatahana Fiarovana na fitahiana @ razana sy ny fivavahana @ ATRA
Raha ny tena kristianisma aloha dia tsy misy idirany @ fivavahana @ razana mihitsy!!raha ny tena kristianisma tena madio à la base no resahiko fa tsy ilay fomba fijery mampifangaroharo io
Raha samy tena manaja fa tsy mampifangaro finoana tsy mitovy dia ihena ny ady sy fifandirana,ny fifanaratsiana
Samy manana izay tompoiny tokoa Fa iza moa isika no hitsara ny mpanompon'ny hafa?Eo anoloan’ny mpampiasa azy sy hivavahany no ijoroany na ahalavoany. ARY SAMY MBOLA HO TSARAINA AVOKOA
Date: 09 novembre 2016 - 13:53
Ka ho an' ny kristianina, ny fomban'ny Ntaolo Malagasy ihany no tsy tokony arahina. Ny hazo noely: fombafomban'ny païens germaniques, père Noël: noforonon'i coca-cola, vendredi 13, 13 à table...misy manaraka izany, finoanoampoana, fa avy @ vazaha dia mety (satria civilisé?). Fa rehefa fomba Malagasy, dia lazaina fa Satana!
Potehina daholo ny finoana Malagasy!! Menatra raha vao miresaka ny fomba Malagasy!!
Asa? Sao dia izany ary no endriky ny fandrosoan'ny Malagasy?
Date: 09 novembre 2016 - 15:45
Mampalahelo!< Raha kristianina tena mitady ny marina dia laviny daholo ny sampy rehetra!!
Fa mila fantarina tsara koa aloha hoe inona ny atao hoe sampy!!
ny sampy ve tsy izay rehetra maka ny toeran'Andriamanitra fa tsy misy idiran'ny hoe fomba vazaha sy gasy!angaha moa misy olona mivavaka sy mangataka fiarovana @ hazo noel na père noel sns??
Rehefa hery hafa itokiana sy hianteherana ankoatran'Andriamanitra no fazahoakao ny atao hoe sampy!!fa ny coca-cola kosa angamba tsy manome harena ary toky momba ny fahatanterahana ny faniriana.
Date: 10 novembre 2016 - 13:54
Efa nahavita trano efa ho 10 taona aho izao.Ka izao no nataonay, nitaomina ny biriky aloha, izay vao ny vato sy ny sns, nanao fanompoampivavahana ny alakamisy vao maraina, dia izay, tsy nasiana dadarabe sns izany. Nony vita indray ny rihina dia tsy mba nasiako saina nitsangana izany satria tsy fantatro mihitsy ny dikany.
Fanazavana kely, ilay biriky aloha vao vato io, dia ambety resaky ny mamako fahiny mihitsy, fa izany no fanaon'ny ntaolo dia izay. Ny hoe alakamisy vao maraina indray dia toro lalana avy amin-dry zareo mpanao trano.
Date: 10 novembre 2016 - 18:55
Raha vao manao zavatra ka vao hoe misy fombafomba toka sy ny tariny de efa fanompoantsampy zany. Tsy misy mivavaka ihany rehefa aloha ny hanao zavatra.Ny vavaka ihany no mahery
Date: 10 novembre 2016 - 20:18
Fa raha manapoaka champagne, mety!! Mankalaza inona na iza??
Ataovy foana! Ahiliho ihany ny fomban-drazana rehetra! Ataovy gidron'ny vahiny foana isika;
Ankehitriny sady tsy gasy intsony, kanefa tsy ho vazaha mihitsy.
Tsy resaka fivavahana io fa fomba fanao.
Ario daholo ny maha-ianao anao, dia tsy ho 5 avy any @ gisitra fa ho gisitra tanteraka!!!
Date: 10 novembre 2016 - 20:38
Na tsy hivavaka aza kosa aho tsy hiloloha sahomborera manodidina tokotany miaraka amin ny rano ao anaty ravinakondro e.. tsy resy lahatra amin izany fomba izany intsony aho na dia misy hilaza fa tsy Gasy intsony aza e..
Mazotoa ianareo raha hanohy.
Date: 10 novembre 2016 - 23:09
o ry mampalahelo a!manapoaka champagne hosotroina sy mandraraka toaka ho an'ny razana koa ve dia hitovy ny dikany e?? Ny finoanoam-poana ataon'ny vazaha na gasy ohatra hoe mampiasa porte-bonheur sy gri gri no resahana eto
Par: mpanao trano
Date: 12 novembre 2016 - 11:17
Mbola tsy nisy valiny mazava ilay fanontaniana napetrakin'ny tompon'ny loha-hevitra. Za koa tsy mahafantatra ny dikan'ny mamono akoho sy mandraraka toaka rehefa manao trano. Fa fomba otran'ny fomba rehetra ihany izany. Ny firenena sy ny tany rehetra samy manana ny fombany daholo. Fa isika malagasy moa notaizaina tamin'ny fampitahorana foana hatramin'izay ka manjary lasa resabe ny fanarahana na tsia ny fombafomba. Tsy ilaozan'izay misy mampitahotra ankolaka foana hoe raha tsy manao an'izao de zao. Indraindray tsy tenenina ny zavatra mety hitranga raha tsy manao ny fomba, fa atao fotsiny hoe izay ny fomba, satria manjary manana eritreritra hi-défier ilay olona hilazana azy. Fa ny tanjona dia ny hanao izay hampatahotra an'ilay vahiny tsy mahalala ny fombafomba. Avy eo koa moa nidiran'ny resaka fivavahana vao maika niampy karazana tahotra hafa.
Ny toro-hevitro dia tsotra, rehefa misy ray amandreny, na tompo-tany, na zoki-olona... manafatra mafy toy izany dia aza toherina. Tanteraho raha tsy dia mampahory anao. Raha toaka sy akoho izany mety tsy mandany mihoatra ny 20000Ar de vita. Tanteraho ho fanajàna azy ireo, sy fanajàna ny tany, n'aiza n'aiza no misy anao.
Mpanao trano sy lalana ny asako. Mandeha matetika any ambanivohitra sy any @ faritra. De mahita karazana fombafomba. Fa tena zava-dehibe mihintsy ny manatanteraka ny fomba fanao any rehetra any. Raha tsy ataonao izany dia malaindaina ireo mpiasa mpanatanteraka ny asa. Miahiahy lava. Raha vao misy olana kely na misy zavatra mitranga eo amin'ny asa dia ianao no hifoteran'ny tsiny, lazainy fa vokatrin'ny tsy fanaovana ny fomba no anton'izany. Ianao nefa mahafantatra tsara ny antony ara-teknika nahatonga ny olana. Fa de aleo tsy miady hevitra fa atao ny fombany.
Sady ataovy ampifaliana sy amin'ny saina malalaka.
Date: 12 novembre 2016 - 13:18
Mpanao trano>> marina tapany ny lazainao..ekeko fa ny Malagasy dia tena manampinoana sy mahatoky ny fisian ny hery miafina mitahy na manasazy raha tsy tanterahana izay tiany..
Sitrapo ihany kosa no anarahana izay fombafomba efa nisy taloha na tsia.
Ny olana misy mantsy dia mbola misy ny olona izay mahavita mamosavy, manao sabotage sns rehefa tsy manaraka ny sitra-pony ianao ka izay no ihatsarana velatsihy manao fomba ho an ny sasany..
Raha ny anay dia tena tsy nanao fombafomba Malagasy intsony izahay satria sady tsy mahay intsony no tsy resy lahatra ka na ny macons sy ny ouvrier aza dia nafarana fa raha mbola manana ny fombany izy dia aleo misaraka dieny mialoha fa tsy miara-miasa .
Finoana ihany io..na mivavaka ianao na tsia na kristiana na finoana hafa koa..mety foana io.
Mirary soa ho an izay manangana e.
Date: 15 novembre 2016 - 14:45
Manana ny fombany ny Malagasy taloha rehefa hanangana trano. Misy antony mazava tsara sy fanazavana azy daholo ireo fomba ireo. Tsy voatery hitovy foana ny fomba atao fa mety misy mahasamihafa azy kely araka ny tanjona tiana tratrarina amin'ny trano izay ahorina.
alohan'izany anefa dia tiako ny manazava kely ny fandinihana vitsivitsy nataoko:
Ny malagasy dia efa fatra-pinoana an'Andriamanitra sy ny fisian'ny fanahy maro izay misy tsara ary misy ratsy. Nino koa izy ireo ny herin'ny andro sy ny fotoana hanaovana zavatra. Ary hain'ny Malagasy ny fisian'ny singa eto amin'ny natiora hanampy azy (ravinkazo, hazo, sns....), anisan'ny nahay niaina niaraka tamin'ny natiora ny Malagasy ary nahafantatra tsara ny heriny manontolo
Ahafahana mahita taratra izany ireo lovantsofina toy ny angano, ny ohabolana, ny ankifidy sns. tsy tongatonga ho azy ny fitenenena hoe
- andro miditra,
- ny hoe rehefa mety ny atao na ny sahobakaka aza mampiditra rano eny an-tanimbary fa rehefa tsy mety ny atao na ny ranonampango aza misy voay
- Aza ny lohasaha mangina no jerena fa Andriamanitra antampon'ny loha
- ny mandrava sarotra, sns
sns maro be izay tsy voatanisa
Izany fahaizana rehetra izany anefa dia fanahy iniana noravaina sy nafenina rehefa tonga ny nampiditra ny kristianisma teto amintsika. Aleo aloha mazava tsara fa tsy ny kristianisma no ratsy fa ny fomba nampidirana azy teto sy ireo nampiditra azy izay nanafangaro azy tamin'ny politika.
Ankehitriny dia honohono sisa no tena voatazona amin'ireo fomba malagasy taloha rehetra ireo. Honohono ny hoe tsy mahazo manomboka asa afa-tsy alakamisy sy talata, honohono ny hoe mandraraka ran'akoho sy toaka isaky ny zoron-trano. Ary tena vitsy sisa no mahafantatra ny anton'ny fomba, izay rehefa alalinina, na finoana na tsy finoana dia tena mitombona tsara.
Ny torohevitro, raha hanangana trano dia manatona mpanandro satria tena mila fahaizana mihitsy ny fombafomba rehetra rehefa hanangana trano. Fa ambagovangony fotsiny ireto omeko ireto.
Mahiriko etoana fa malalaka tsara ny tsirairay na hanaraka fomba malagasy na fomba hafa na tsy hanao fomba mihitsy. Ny nanoratako eto dia mba ahafahatarantsika fa misy ny fomba malagasy ary misy antony ara-tsiantifika sy ara-panahy ireo fa tsy nataotao fotsiny
1- Fisafidianana ny toerana hananganana trano: anisan'ny tena manan-danja lehibe ny fisafidianana ny toerana hananganana trano satria ho an'ny malagasy dia io no hamolavola anao sy ny ankohonanao.Ny malagasy dia fatra-mpandinika ny tontolo misy azy ka dia jereny tsara ny eo amin'ny tany sy manodidina azy rehefa hanangana izy. Tsy fanao ohatra ny manangana trano eo amin'ny tany izay voninkazo ratsy no maniry eo, raha misy renirano mandalo eo amin'ilay toerana, raha anelanelana tendrombohitra roa sns........Teo dia efa hainy ny mijery ny circulation ny energie na "Fenshui" hoy ny tatsinana
2- Misafidy andro: Misy ny andro miditra, fa misy koa ny andro tsara. Miankina amin'ny tanjona tiana tratrarina ny fisafidiana andro: oh: te hampidi-bola ve, tiana ho vita haingana ve ny asa, tiana hafana tsara ve ny ao antrano sns..... Ny tsara ho fantatra dia marobe ny andro tsara hananganana trano kanefa miankina koa amin'ny vitan'ilay olona io
3- Rehefa vita ireo vao manomboka ny fombafomba fananganana ka misy dingana maromaro toy izao izy ireo matetika (misy laharana manokona ny fanaovana azy fa tanisaiko tsy misy laharana fotsiny ireto):
- Fisaorana an'Andriamanitra sy fangatahana an'Andriamanitra ny fahasoavana eo amin'ny trano
- Fisaorana ny razana sy fangatahana fitahiana amin'ny razana
- Fisaorana ny natiora sy ny vazan-tany efatra
- Ala-saritaka sy ala-romoromo
- fametrahana karazan-kazo sy karazam-bato izay mitondra vintana sy manatsara vintana sns....
- Fiaraha-misakafo izay efa misy karazan-tsakafo manokana mihitsy handrahoina rehefa manangana trano
Efa lava be ny fanazavako fa ialana tsiny, mbola ambagovangony anefa io fa mbola lava noho io raha tena hazavaina antsipirihiny, fa ny tena tsara dia manatona mpanandro. Ny olako fotsiny tamin'ny nanangana trano dia ny mahita mpanandro mahatoky satria bestaka koa ny mpisandoka
Date: 16 novembre 2016 - 01:10
mampme ne le milaza oe tsy manao zan fombandrazana izany fa mpiandry atsy eh pasitera aroa nefa avy eo oe manaraka ny toromarika ny mpanao trano ndray oe amin'ny andro zao ihany zay no afaka manomboka asa de manaiky. Enao no patronany de mba tenenino izy iasa oe latsinainy oe fa tsara daholo ny andro.
Date: 16 novembre 2016 - 19:26
Aoka tsy hisy eo aminao izay mampandeha ny zananilahy na ny zananivavy hamaky ny afo, na mpanao fankatovana, na mpanandro, na mpanao sikidy, na mpanana ody, na manao ho masim-bava, na mpanadina amin'ny manao azy ho tsindrian-javatra, na mpanao hatsarana, na mpanontany amin'ny maty.
Fa ireo firenena izay efa horoahinao ireo dia mihaino ny mpanandro sy ny mpanao fankatovana;
Date: 01 décembre 2016 - 03:19
"Raha tsy Jehovah no manao ny trano dia miasa fona ny mpanao azy "Tsy misy andro ratsy izany afa tsy ny fitsaharana izay natao ivavavahana " tamin'ny andro voalohany Andriamanitra nanao....... ARY HITANY FA TSARA IZANY nitohy hatramin'nny andro faheninana ary hitany fa tsara izany izany hoe ny andro rehetra tsara avokoa za ny trano nataoko tsy nisy nanandroko tsy nisy toka tsy nisy akoho fa vitan 'Andriamanitra sady tsara no mpiandry no antsoina satria santana tsy kely lalana,lehibe raha ny vola teo ampelatanana tsy mampino nanao fasana ny RAD tsy nanandro fa tsy nisy voany androm-pasana izahay mianakavy hatrami'izao rhf mino ianao dia izay no zava dehibe ary ny sorona na ra alatsaka io na inona efa vitan'ny Kristy teo amin'hazo fijaliana mahereza mivavaka fa io no tena ilaina indrindra rehefa tsy manao ny fomba mahazatra ny olona ianao fa misy guerre spirtuel ao
Date: 18 décembre 2016 - 08:22
Miarahaba antsika !
Izahay raha nanao trano dia nentina am_pahatsorana. Tsy nila mpanandro fa fotoam-pivavahana fohy no natao dia raikitra ny asa. Ny fitodiky ny trano dia arak'izay mampety azy @ fandehan'ny lalana eo alohany, na ny fidirana eo an-tokotany. ny tranonay iray mitodika miatsinanana, ny faharoa miankandrefana, ny fahatelo mianavaratra, tsy nisy olana izahay mianakavy fa notahian'Adriamanitra soa aman-tsara.Efa nanao fasana koa, nitady akoholahy sy malabary ny mpanao fasana fa izahay tsy nety nividy fa tsy fantatray tsinona izay ilany azy, nataony tsara ihany ny fasana ary misaotra ny Tompo fa vita soa aman-tsara sy ara-potoana tsara.
Izay maharesy lahatra anao atao. Nony vita soa aman-tsara ireo dia nisy fiaraha-misakafo tao aorian'ny fotoam-pivavahana fohy nisaorana an'Andriamanitra Tompon'ny asa.Tsotra dia tsotra ny miaraka @Andriamanitra e ! Matokia azy fa ataony tanteraka !
Date: 19 décembre 2016 - 10:49
Ho tanteraka aminao araka ny finoanao io ee.
Raha EFA kristianina ianao dia fomba kristianina arahina, raha manaraka ny fomba malagasy dia izay arahina.
Io na kely toa voatsinampy ary ny finoanao ka mafy orina dia ahavitanao zavatra;
Date: 19 décembre 2016 - 11:42
Marina ny an'ny <Kalakely>, Samia manaraka ny fombafombany fa HAJAO KOA NY AN'NY HAFA. Raha Kristianina ianao hajao ny fomba malagasy raha miaraka amin'ny olona mandala izany ianao. Raha Katolika ianao na finoana hafa, mivavaka alahady, hajao ny mpino mivavaka asabotsy fa finoany izany Aza manimbazimba ny finoan'ny hafa. Raha mpiasa izy ka tsy miasa Alarobia dia aza ampiasaina amin'ny andro fady azy izy. Nanamboatra lalana eo amin'ny 120 km eo izahay (route d'accès). contrat tamin'ny fanjakana ary misy délai contractuel tsy maintsy arahina, izay tery dia tery tokoa. Adventiste anefa ilay conducteur d'engin ka tsy mety miasa Asaabotsy, ny engin koa anefa hofaina isan'andro. Nampanantsoiko izy ary nolazaiko azy ny olana. No proposer- ko azy ny solution. Manaiky aho ny tsy hiasan'ise asabotsy fa ny condition-ko fotsiny dia tsy maintsy tonga amin'ny farany isika amin'ny daty toy izao(nasiako marge kely). Tonga dia courage be razoky. Tsy maintsy tonga isika sefo hoy izy fa aza matahotra ianao. Ny nataony : Alahady ka hatramin'ny zomà, amin'ny telo maraina manomboka ka amin'ny valo ora alina vao mody. Ny asabotsy maka aina. Lasa aloha be izahay tamin'ny délai ary voaray soa aman-tsara ny asa. Na kristianina aza aho, mihinana kisoa, raha misy mitehy amiko fa fady ny mitondra kisoa amin'ny toerana iray, dia tsy mitondra izany aho ary raha misy miteny fa tondrahana toaka sy amonoana akoho vao atomboka ny trano, dia miezaka manaraka izany aho fa raha tsy misy miteny dia ataoko fotsiny amin'izao..... fanajako ny olona mino izany no anaovako izany fa tsy finoanoam-poana akory
Date: 31 décembre 2016 - 06:03
Ny kristianiana tsy manao tahaka ny trandraka ka manaraka volon-tany na ohatrin'ny tanala ka miovaova loko arakin'ny toerana ipetrahany fa tsy miombona zioga itambarana amin'tsy mino tsy misy iraisan'i Kristy sy satana izany na ny marina sy ny lainga " ho halan'ny olona ianareo nohon'ny Amiko hoy ny Tompo"
Date: 31 décembre 2016 - 06:49
Tsivery<< tsy manaraka volon-tany fa MANAJA NY FOMBA NY TOERANA MISY ANAO. Tsy voatery tonga ao @ ilay toerana ianao na manatrika ny fombafomba.
Ho avy izao ny fivoriana isan-karazany voalohan'ny taona. Misy toka-trano iray ao @ fianakaviana mialohavana fotoam-pivavahana complet ny fihaonam-pianakaviana : hira (3/4), ranom_bavaka, tori-teny; ny filazan-draharaha ihany no tsy misy! maharitra 1 ora sy sasany. Izany no fomba'ilay tokan-trano, izy no mandray @ ity taona ity; dia fantatro fa hisy izao no ho tonga "tara"! Tsy misy tezitra! tsy misy faneriterena!Efa nifanaraka hoe vitan'izay ny resaka fivavahana!
Rehefa tsy tianao ny fomban-tany (ohatra tsy mihinana kisoa), dia tsy makany fotsiny ianao! Rehefa manao fasana ianao ka tsy hanaraka ny fomban-drazana, dia izay maharesi-lahatra anao atao. Fa aza mandrabiraby kosa izay manaraka ny fomban-drazana!
Date: 03 janvier 2017 - 16:36
Ny zaodahiko, mpampiady akoho tsy laitra isank'alahady, bavinay mikarakara tokantrano, nanao trano ry zareo dia pasteur no nalainy niady fototra raha tokony ho Mon Père. Fa vetivety de vitany. Ny tiako ahatongavana dia hoe finoana sy ny entimanana io.